अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देश फर्क भनेपछि नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा, नेपाल सरकारले चाल्यो यस्तो कदम ! – " सुलभ खबर "
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देश फर्क भनेपछि नेपाली विद्यार्थी अन्योलमा, नेपाल सरकारले चाल्यो यस्तो कदम !
कोरोनाका कारण ३० हजार बढी विद्यार्थीले आफ्नो काम गुमाइसके छन् । ‘यहाँको लकडाउन अझै २/३ हप्ता यस्तै हुने हो भने केही विद्यार्थी सडकमै आउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’, एक नेपालीले भने, ‘नेपाल सरकारले विद्यार्थीको लागि घर फर्किने बाटो खुला गरिदिए उनीहरु फर्किन सक्थे।
धानमन्त्री मरिसनले शुक्रबार अष्ट्रेलियाको भिसा सर्तमा एक वर्ष आफुले आफैलाई सहयोग गर्न सक्ने सर्त भएको र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेकाहरु स्वदेश फर्कन सक्ने बताएका थिए। तर उनको यो भनाईको अष्ट्रेलियामा नै विरोध सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दल अस्ट्रेलियन लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्रीको यस भनाईको विरोध गरेको छ। दु:खको बेला उनीहरुलाई घर जाउ भन्नु भन्दा सहयोग गर्नुपर्ने विपक्षीको भनाई छ।